theZOMI: Re: [mrsorcerer:37866] မိတ္ထီလာမြို့အရေးခင်းနှင့်ပတ်သက်ပီး ထူးခြားတာ ငါးခု.....byငရဲ သား
Re: [mrsorcerer:37866] မိတ္ထီလာမြို့အရေးခင်းနှင့်ပတ်သက်ပီး ထူးခြားတာ ငါးခု.....byငရဲ သား
ဒီကာတွန်းက မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို တရုတ်မြောက်ပေးလို့ကုလားကို တိုက်ရဲတာလို့အဓိပါယ် ဖေါ်ဆောင်နေပါတယ် ။ ကုလားဗမာ ရန်စက အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကထည်းက ရှိနေတာ သမိုင်းကိုသေသေခြာခြာ မသိဘဲ မလေ့လာဘဲ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ဆော်ကား လိုက်တဲ့ကာတွန်းပါ ။
တရုတ်သွေးထိုးကောင်းထိုးပါမယ် ။ ထိုးမှာ အသေအခြာပါ ။ သူတို့ကို မုန်းနေတာတွေ အာရုံလွှဲသါားအောင် လုပ်မှာ ကတော့ အသေအခြာပါ ။
2013/4/10 Ruby Mirror <ruby.mirror786@gmail.com>
ထူးခြားတာ ငါးခု တွေ့မိပါတယ် ...။ တချို့အချက်တွေက တကယ်သိချင်နေတာပါ...။
(၁) ဦးသောဘိတ အသတ်ခံရတဲ့ ပုံ အမျိုးမျိုး ပျံ့နေပါတယ်...။ Secure Area က ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေပါ..။ ပုံစံအမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်...။ အဲဒီပုံတွေ ဘယ်နှစ်ယောက်ရိုက်ပြီး ဘယ်သူတွေဆီကရပါသနည်း..။
(၂) အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တစ်ယောက်ကို ၀ိုင်းရိုက်နေတဲ့ video file ..။
video ရိုက်သူက Secure Area က ရိုက်နေတာပါ..။ တနည်းအားဖြင့် ဗမာဖက်ကပါ....။ အဲဒီဖိုင်မှာ နောက်ဆုံး ရဲတွေ ရှေ့မှာလည်း ရိုက်နေတာပါပဲ...။
(၃) ဗလီကို မီးရှို့နေတဲ့ video file ပါ..။ ရှေ့မှာ ရှို့သူက ရှို့နေ...။ သွားသူက သွားနေ..။ အေးဆေးပါပဲ..။
(၄) RSV က တင်ထားတဲ့ ပုံတွေပါ..။ ဘင်္ဂလီ ၈ ယောက် ကို သံဃာတော်တစ်ပါးက တစ်ဦး ငွေ ဆယ်သိန်းယူပြီး ရန်ကုန်ကို သာသနာ့အလံထောင်ထားတဲ့ ကားနဲ့ ပို့ဆောင်စဉ် ဖမ်းမိပုံပါ..။ ပုံတွေက အနီးကပ် portrait တွေနဲ့ ကားဖြစ်တဲ့ Honda CRV အမျိုးအစား၊ သံဃာမှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ ဘွဲ့အမည်၊ တွေပါ ပါဝင်ပါတယ်..။ RSV က အဲဒီပုံတွေ ဘယ်က ရတာလဲ...။ ဘယ်တာဝန်ရှိသူပေးတာလဲ..။
(၅) နောက်တစ်ချက်က ထိုင်းသံရဲုးရှေ့မှာ ဗိုလ်ချုပ်ပုံနဲ့ ဒေါ်စု ပုံကို ဘင်္ဂလီ တွေ မီးရှို့နေပုံပါ...။
အဲဒီပုံကို အခြား Angle က ရိုက်ထားတာ ရှိရင် ကြည့်ချင်ပါတယ်...။ နောက်ပြီး မီဒီယာ အကိုးအကားရှိရင် သိချင်ပါတယ်....။
နှဲ့တဲ့သူတွေက နှဲ့ နေတာပဲ ..။
ယိုင်သွားတဲ့ သူတွေက ယိုင်သွားတာပဲ..။
နောက်ကွယ်က ကြိတ်ရယ်တဲ့သူကလည်း ရယ်နေပါတယ်..။
ရှေ့က ရင်ဘတ်နဲ့ ခံပေးနေသူကလည်း... ခံပေးနေပါတယ်..။
အခု ကုလား - ဗမာ အရေးအခင်းတွေ မဖြစ်ခင် .... ဟိုးအရင် ...။
ရခိုင် ကိစ္စတွေ စပြီး ... သန္ဒေတည်နေချိန် ...
ရခိုင် အရေးအခင်း ... ဖြစ်လာချိန် ..။
ပြည်တွင်းနေတွေနဲ့ အကြိတ်အခဲတွေ စတင် သန္ဒေတည်လာချိန်...။
အခု ကုလား - ဗမာ အရေးအခင်း .. ဖြစ်ပွားချိန် ....။
ဖြစ်စဉ် တစ်လျှောက်လုံး မှာ အကျိုးရှိသွားသူတွေ ရှိပါတယ်. ..........။
တရုတ် ရေနံ၊ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း မေလကုန်မှာ ပြည်သူတွေ စိတ်ဝင်စားမှု နည်းပါးစွာ၊ ကန့်ကွက်မှုတွေ မပေါ်လွင်စွာနဲ့ပဲ .... ပြီးဆုံးပါတော့မယ် ...။
မွေတောင်နီကယ်၊ လက်ပံတောင်းကြေးနီ၊ ချီဗွေငယ်၊ ကျောက်ဖြူရေနက်ဆိပ်ကမ်း အစရှိသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနည်းပါးမှုများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် အခြား လူဝါးဝ လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုများ highlight လုပ်ခြင်း .. မှေးမှိန်သွားပါတယ်....။
ကျောက်ဖြူ-ကူမင်း သဘာဝဓါတ်ငွေ့- ရေနံပိုက်လိုင်း လမ်းကျောင်းကျရာ အနီးအနား ကွတ်ခိုင်၊ တန့်ယန်း၊ အပါအ၀င် ဒေသများရှိ တအောင်းပလောင်၊ SSA၊ KIA အစရှိသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များနဲ့ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပေါ်နေသော တိုက်ပွဲများကိုလည်း ယခင် လိုင်ဇာကို တိုက်ခိုက်သော တိုက်ပွဲ ကိစ္စလောက် စိတ်ဝင်စားမှု မရှိသလောက် ဖြစ်သွားပါတယ်...။
သိလိုလျှင် ..အောက်ပါလင့်ကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်..။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူကုန်ကူးမှု အများဆုံးဖြစ်ပေါ်နေသော တရုတ်ပြည်သို့ သတို့သမီး ရောင်းစားသည့် မှုခင်းကိစ္စများ မီဒီယာများမှာ ဖော်ပြမှုနဲ့ လူအများ စိတ်ဝင်စားမှု နည်းပါးသွားပါတယ်..။
လွန်ခဲ့သော နှစ်နှစ်ဆယ်လုံးလုံး တရုတ်ပြည်သို့ တင်ပို့ခဲ့သည့် ကျောက်မျက်၊ ကျောက်စိမ်း၊ သစ်၊ ရေနံ သဘာဝဓါတ်ငွေ့၊ ငါးဖမ်းခြင်း စသော သယံဇာတများ လျော့ပါးလာခြင်း၊ စစ်အာဏာရှင် သက်ဆိုးရှည်ခဲ့ခြင်းကို မျက်ကွယ်ပြုကာ .. နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ တရုတ်ပြည်ကို အစိုးရနှင့် ပြည်သူမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း China Daily သတင်းစာ၏ ဖော်ပြမှုအားလည်း လူစိတ်ဝင်စားမှု မရှိသလောက် ဖြစ်သွားပါတယ်...။
ဆူဒန်နိုင်ငံ ဒါဖာ အစရှိသော အာဖရိက၊ ဒေသများရှိ သယံဇာတပေါများကာ ဆင်းရဲသော နိုင်ငံများ၏ နိုင်ငံရေးကိစ္စများ၊ ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းမှုများ။ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းများ၊ ပြည်တွင်းစစ်နှင့် လူမျိုးစု အငြင်းပွားမှု တိုက်ပွဲများတွင် တရုတ်နိုင်ငံ နောက်ကွယ်မှ ပါဝင်ပတ်သက် ပံ့ပိုးနေခြင်းအား မြန်မာလူငယ်များ စိတ်ဝင်စားမှု နည်းပါးခြင်းကလည်း .... အကြောင်းအရာ အကျိုးသက်ရောက်မှု တစ်ခု ဖြစ်စေပါတယ်....။
ဦးအောင်သောင်းစွပ်စွဲသလို .. စွပ်စွဲရရင် ... နောက်ကွယ်မှာ ... ကွန်မြူနစ်တော့ပါတယ်...။
ဒါပေမယ့် ဗကပ တော့မဟုတ်တာ သေချာပါတယ်...။.
ကာတွန်း လဂွန်းအိမ် ၏ ကာတွန်းအား ယူသုံးပါသည်..။